The Ab Presents Nepal » यसकारण डेढ वर्ष पछि धकेलियो मेलम्ची!
यसकारण डेढ वर्ष पछि धकेलियो मेलम्ची!
काठमाडौँ, २२ जेठ-: आगामी एक वर्षभित्र पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं नआउने निश्चित भएको छ । आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न मेलम्ची विकास समितिले १५ महिनाको समयसीमा तोकेर टेन्डर आह्वान गरेकाले सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने भएको हो । समितिले हेडबक्स निर्माणका १५ महिना र सुरुङ निर्माणका लागि १२ महिनाको समयसीमा तोकेको छ ।
गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको बाँकी काम तत्कालै अघि बढाउने निर्णय गरेपछि समितिले टेन्डर आह्वान गरेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यअनुरूप सरकारले सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
‘टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन्,’ आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले भने, ‘कम्पनी छनोटका लागि एकदेखि डेढ महिना लाग्छ । कम्पनी छनोट हुनेबित्तिकै काम सुरु गर्ने तयारी छ ।’ काम सुरु हुन थप एक महिना लागेमा आगामी आर्थिक वर्षमा काम सकिने सम्भावना न्यून छ । त्यसमाथि निर्माण व्यवसायी अहिले आन्दोलनमा छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा भाग नलिने घोषणा गरेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
आपूर्तिका आठ प्याकेजमा स्थानीय ठेकेदार -: विभिन्न १० प्याकेजमा विभाजन गरेर बाँकी काम सक्ने योजनाअनुरूप बाँकी आठ प्याकेजको काम स्थानीय ठेकेदारलाई दिने तयारी गरिएको छ । ती आठ प्याकेज दुई ठूला प्याकेजमा आवश्यक सामग्री आपूर्तिसँग सम्बन्धित रहेको कँडेलले जानकारी दिए । सुरुङमार्गको ठेक्का पाउने कम्पनीले सुरुङको अन्तिम संरचना निर्माण, डाइभर्सन सुरुङ, अडिट सुरुङको लाइनिङलगायतका काम गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि भेन्टिलेसन बनाउने काम गरिरहेका, पाइप आपूर्ति र जडानको काम गरिहेका ठेकदारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
हेडबक्सतर्फको ठेक्का पाउनेले पानी थुन्ने इन्टेकको संरचना, पहुँचमार्ग स्तरोन्नति कफर ड्यामको डिजाइन र निर्माण, क्याम्प साइडको मर्मतलगायतका काम गर्नुपर्नेछ । आयोजनाका अनुसार हेडबक्सको ठेक्का पाउनेले सोझै हाइड्रोमेकानिकल गेट, एसएस पाइपको आपूर्ति जडानको ठेक्का पाउने ठेकेदारसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिब दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
२९ मंसिरदेखि काम ठप्प-: गत २९ मंसिरमा इटालियन ठेकेदार कम्पनी (सिएमसी)ले विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजनाको काम बीचमै छाडेको थियो । सिएसमीले २ पुसमा काम नसक्ने भन्दै आयोजनालाई ठेक्का रद्द गर्न पत्र बुझाएको थियो । ६ माघमा सरकारले काम छाडेर भागेको कम्पनी सिएमसीलाई ठेक्का खारेजी किन नगर्ने भन्दै त्यसको कारण भए १४ दिनभित्र जवाफ पठाउन पत्राचार गरेको थियो । सरकारले तोकेको समयमा जवाफ नफर्काएपछि आयोजना बोर्डले ठेक्का तोड्ने निर्णय २४ माघमा गरेको थियो, त्यसयता आयोजनाको काम ठप्प छ । उपत्यकामा पानी ल्याउने हिसाबले आयोजनाको काम अब पाँच प्रतिशत मात्र बाँकी छ । अहिले बाँध नबाँधी ड्राइभर्सन बनाएर पाइपमार्फत पानी ल्याउने गरी गरिएको छ । खोलामा बाँध बाँध्नेलगायतका अन्य बाँकी कामका हिसाबले आयोजनाको काम १० प्रतिशत बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।
आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी-:ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम छाडेको ६ महिनासम्म पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै मजदुर र ठेकेदार आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले आयोजनापीडित स्थानीय संघर्ष समिति नै बनाएका छन् । समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । भुक्तानी नभई नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । यही अवस्थामा नयाँ ठेकेदार काम गर्न आए अमान्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ
प्रकाशित मिति June 5, 2019